Nagarik Shukrabar - ‘कविताको बिक्री होइन, बोली महत्वपूर्ण’
‘कविताको बिक्री होइन, बोली महत्वपूर्ण’
शनिबार, २७ कार्तिक २०७३, ११ : ३२ | शुक्रवार , Kathmandu
कवि नवीन प्राचीनको पहिलो कवितासंग्रह ‘उभिएर एक्लै’ भर्खरै प्रकाशनमा आएको छ । कविताका बलराम अधिकारीकृत अंग्रेजी अनुवाद पनि संग्रहमा उपलब्ध छन् । यही सेरोफेरोमा रहेर उनीसँग प्रवीण बानियाँले गरेको कुराकानीः
खै ! कस्ता भनौँ ? पहिला त कविले आफ्नै लागि लेखेका कविता छन् । अब यी कविता अरूका पनि भएका छन् ।
मोफसलबाट उठेको कविलाई काठमाण्डूसम्म आइपुग्न कति गाह्रो भयो ?
कविता लेख्न वा लेखेर मलाई कहीँ पुग्नु थिएन । र, कविताकै माध्यमबाट राजधानीसँग उठबस गर्न वा संगत गर्न त्यस्तो गाह्रो–सजिलोको अनुभूति मलाई भएन । बरु यसो भनूँ– धेरै संयोग र संगतले सहयोगी भूमिका खेल्यो ।
कविताको बजार सानो देखिएकाले व्यावसायिक संस्थाले आफ्नो लगानीको सुरक्षा र मुनाफामा ध्यान दिने हुँदा कविता छाप्ने प्रकाशक पाउन सजिलो छैन, यो साँचो हो । तर, मेरो हकमा म भाग्यमानी रहेँ । मैले प्रकाशक खोज्न भौँतारिनु परेन ।
हाम्रो सामाजिक चेतना र परम्परामा समसामयिकताको ठूलो प्रभाव रहन्छ । राजनीतिक र सामाजिक बहस संघीयता, पहिचान र अधिकारका विषयमा केन्द्रित रहेको यो समयमा कवि–लेखकले आ–आफ्ना ठाउँबाट सामाजिक दायित्व वहन गरिरहेका छन् ।
हाम्रो साहित्यमा व्यापक गुटबन्दी छ भनिन्छ । नयाँ पुस्तामा यो अझै बढेको सुनिन्छ । तपार्ईं त मोफसलबाट काठमाण्डू हाम फालेको मान्छे, कतातिरको गुटमा पर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त सिर्जनामा मोफसल र केन्द्र भन्ने कुराको बोध मलाई कहिल्यै भएन । बरु, पूर्वमा रहँदाको साहित्यिक सक्रियता काठमाण्डू पुगेपछि शून्यजस्तै भयो । यसर्थ म न मोफसलको गुटमा पर्छु, नत काठमाण्डूको । यत्ति हो– आजसम्म मैले गुट–उपगुट झेल्नुपरेको छैन । मेरा लागि त आफ्ना कविता नै गुट हुन् ।
समाजमा एकै किसिमको सोच, प्रवृत्ति, विचार भएका मानिसको समूह बन्नु स्वाभाविक हो । तर, हामी यहाँ गुटको कुरा गरिरहेका छौँ । गुट अलि फरक र गलत स्वार्थ भएका मानिसहरूको हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । व्यापारीहरूले चलाउने सिन्डिकेटजस्तो गुटले असल साहित्यकर्मलाई हित गर्दैन भन्ने लाग्छ ।
नयाँ पुस्ता केही हतारोमा, केही लहडमा कविता लेखिरहेका छन् भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि । तपार्ईं के भन्नुहुन्छ ?
जसले जसरी भए पनि लेखिरहेका छन् । जसले जे भए पनि पढिरहेका छन् । कम्तीमा उनीहरूले केही सिर्जना त गरिरहेका छन् । लेखेर कोही लामो समयसम्म बाँच्ला, कोही छिट्टै ओइलाउला, त्यो भिन्न कुरा भयो । म लेख्ने मानिसलाई प्रेम गर्छु ।
कतिपय बजारमा कवि बिकेनन्, कविता बिकेनन्, कविताका पुस्तकै बिकेनन् भनेर पीडा बोल्छन् । के हाम्रो कविताको अवस्था यतिसम्मको निराशाजनक छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । पीडा हुने काम त म सकेसम्म गर्नु नपरोस् भन्छु । अरूलाई पनि त्यस्तै लाग्दो हो । अर्को कुरा, कवि र कविता नबिक्दैमा निराश हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ । किनभने, कविता मारामार बिक्ने चिज होइन । कविता त कति बिक्यो भन्दा पनि कविताले कुन समयमा के बोल्यो भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ । कविताको बिक्री होइन, बोली महŒवपूर्ण हुन्छ । बाँकी कुरा गौण हुन् ।
तपाईंको त कृति प्रकाशन र घरजम सँगसँगै भयो । यो संयोग मात्र हो कि योजनै थियो ?
यो एकदमै संयोगमात्र हो ।